Iduku Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Iduku Factory
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513500
Iduku elithengisayo elishisayo (Elinamakha nelichichimayo) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngentambo eyenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513501
Iduku elithengisayo elishisayo (Iphethini le-brocade eluhlaza okwesibhakabhaka) Intambo efekethisiwe ye-Thread Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513502
Iduku elithengisayo elishisayo (Iphethini le-brocade pink) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513503
Iduku elithengisayo elishisayo (Iphethini le-brocade eluhlaza) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngesandla okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513505
Iduku elithengisayo elishisayo (chrysanthemum) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngesandla okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513506
Iduku elithengisa okushisayo (iBud eligcwele amagatsha) Intambo efekethisiwe ye-Thread Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngesandla okunemibala emithathu, isandla masenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513507
Iduku elithengisa kakhulu (i-Red maple leaf) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngesandla okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513508
Iduku elithengisayo elishisayo (iqabunga le-maple eliphuzi) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngesandla okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513509
Iduku elithengisa kakhulu (i-Plum blossom) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngesandla okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513510
Iduku elithengisayo elishisayo (iqoqo lembali) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngesandla okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Ikhwalithi ephezulu Iduku Elimenyezelwe Ngesikwele Hanky ​​Ladies Iduku 513511